Tady vaovao sy fehin-kibo iraisam-pirenena ho an'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Efa elaela izay i Apple no namoaka andiany fanontana manokana ho an'ny Apple Watch. Amin'ny fahavaratra, feno hetsika ara-panatanjahantena toa ny Eurocup, ny fiadiana ny amboara amerikana ary ny lalao olympika, tsy azon'i Apple avela nandositra ireo hetsika ara-panatanjahantena ireo mba hametahana fehin-kibo vaovao, fehy izay miaraka amin'ny sehatra.
Apple dia nanambara ny Apple Watch Collection International Collection vaovao, andiana bandy fanatanjahan-tena nilona 22. Ny tarika tsirairay dia maneho firenena. Amin'ny tranga mahaliana antsika dia hitantsika fa i Espana sy Mexico no firenena tokana misolo tena (angamba satria izy ireo ihany no firenena miteny espaniola roa misy an'i Apple ara-batana).
Araka ny voalazan'i Apple, ity fanangonana fehin-kibo vaovao ity dia ahafahantsika mankalaza ny "fika tsy azo ravana sy toe-tsaina tia mifaninana amin'ny atleta sy mpankafy rehetra."
Ny tarika fanatanjahantena Loop avy amin'ny International Collection, dia andiany voafetra izy io, malefaka, miaina ary maivana izy ireo ary misolo tena ireto firenena manaraka ireto: Aostralia, Belzika, Brezila, Kanada, Sina, Danemark, France, Alemana, Great Britain , Gresy, Italia, Jamaika, Japon, Mexico, Holandy, Nouvelle Zélande, Rosia, Afrika atsimo, Korea atsimo, Espana, Suède ary Etazonia.
Ao amin'ny fanambarana izay nanambarany an'ity fanambarana ity, i Amy Van Dyken, medaly milomano 6 fotoana nilomanosana, dia niresaka momba ny fampiasany ny Apple Watch rehefa manao fanazaran-tena amin'ny sezany misy kodiarana izy.
Ny tsirairay amin'ireo kofehy 22 dia misy a vidin'ny 49 euros, misy amin'ny habe 40 sy 44 mm izy ireo (noho izany dia mifanaraka amin'ny Apple Watch rehetra natombok'i Apple teny an-tsena hatramin'ny taranaka voalohany) izy ireo dia azo alaina amin'ny alàlan'ny Apple Store ary mivantana amin'ny fivarotana an-tserasera. Ireo sfera izay miaraka amin'ireo tadiny ireo dia azo sintonina amin'ny alàlan'ny clip vita pirinty eo amin'ny fonosana boaty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tady vaovao sy fehin-kibo iraisam-pirenena ho an'ny Apple Watch